Naasleeyda oo dhan waxey cunaan mandheertooda dhalista dabadeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Naasleeyda oo dhan waxey cunaan mandheertooda dhalista dabadeed
La daabacay onsdag 29 mars 2017 kl 17.32
Rannveig: "Ibi waa xubin mudan in la qiimeeyo"
Laba ruux oo uur leh. sawir: Hasse Holmberg / TT
Waxaa la og-soon yahay in dhammaan xayawaanka naasleeyda ahi ceeyriin ku cunaan mandheertooda (ibidooda) kolka ay dhallaan dabadeed, sidoo kale waxaa jira dad fal noocaasi ah tallaabsada.
Shaashadda internet-ka ayaa laga daalacan karaa qoraallo iyo fikirro sheegaya ama ka warramaya faa’iidada laga helo iyo sidoo kale habab kal duwan ee loo sameeyn karo haddii aan la doonayn in ceeyriinka lagu cuno.
Rannveig Stefansdóttir oo ku dhaqan magaalada Dalby waxay hawo kulul ku bisleeysay 17 ibi (mandheerta haweenka) oo ka timid haween ku dhalay gobolka Skåne. In mandheerta haweenka la cuno waa arrin lagu weyneeyneyo xubintii nafaqada siin jirtay dhallaanku intuu uurka ku jiray, sida ay aamin-san tahay. Sidoo kale waa hab casri ku ah dadyoowga caanka ah ee baraha bulshadu ku kulanto - sociala medier.
- Dhaqankayaga ayaa loo arkaa mandheerta haweenka (Ibida) haraa oo ay tahay in la tuuro. Hase yeeshee waa xubin in la qiimeeyo mudan, sida ay sheegtay mar ay u warrameeysay war-geeyska Sydsvenskan.
Haweenaydan ayaa horraanteedii ku howl-geli jirtay xarunta umulusooyinka ee cisbitalka jaamicadda gobolka Skåne, hase yeeshee iminka ku howl-gasha waxa loo yaqaanno doula oo macnaheedu tahay inay gacan siiso haweenka dhalaya.
Rannveig Stefansdóttir ayaa haweenka ku casunta inay man-dheertooda nadiifiso, dabadeed qiiq kulul ku bisleeyso, dabadeed shiidda oo ku shubta kaabsallo iyaga oo budo ah si loo liqo.
Haweenaydan ayaa kolkii ay qudheedu dhashay cuntay madheerteedii. Iyadoona ku macneeysay mid jilic-san, si sahlan loo calajin karo, isla-markaana leh dhadhan macdanta birta.
Maxay haddaba cilmi baaristu ka leedahay amuurtaa?
Karin Pettersson, dhakhtarad sare waxay ka howl-gasha qaybta dhalliinka ee machadka Karolinska. Iyadoona sheegtay in aanay ahayn falal caadiyan u dhaca in haweenku cunaan mandheertooda kadib kolka ey ilmo dhallaan. Waana tiro aad u hooseeysa, sida ay ku qiyaastay. Hase yeeshee ay badankood haweenka dalbada in mandheertooda la siiyo sheega iney dooneyaan inay xabaalaan ama ay dayrka ku xabaalaan oo geed ka dul abuuraan.
Iyada oo hadalkeedii sii wadatana sheegtay in baaris gaaban oo ay ku sameeysay aanay ku arag cilm-baaris sheegeeysa faa’iidada ama faa’iido darrida mandheerta haweenka oo la cumo. Waxaa jira cimi-baarisyo aad u yar oo aan hab-sami loo sameeyn.
Ma jiraan halis ka iman karta haddaba in la cumo?
- Dhanka kale waa la mid ma jiraan cilmi-baarisyo dhumuc leh oo laga sameeyey oo qeexaya inay dhibaato caafimaad-darro hor-seedi karto mandheerta haweenka oo la cuno, sida ay sheegtay Karin Pettersson oo ka howl-gasha waaxda umulusooyinka ee machadka Karoliniska.